Radio Don Bosco - Mba ho vanona
Plus je l'écoute, plus je l'aime
Miaina sy mitia
Andriano ny fahasalamana
Nosoratan'i Andriambololona Samuel Aimé
Lohahevitra : Mba ho vanona
Naseho ny : 18 jona 2020
Ilaina ny fanomezana fanabeazana ny zanaka amin'ny fampafantarana azy ireo ny lafim-piainana. (17-06-2020)
Naseho ny : 11 jona 2020
Ny tsy fahatokisanao tena no mahatonga ny sakana misy aminao. (10-06-2020)
Naseho ny : 7 jona 2020
(03-06-2020) Hery ary zavadehibe eo amin'ny fiainan'ny olombelona ny fahatokisana.
Naseho ny : 28 mey 2020
(27-05-2020) Ny safidy sy ny talenta nomen' Andriamanitra no maha tafita eo amin'ny fiainana.
Pejy 4 amin'ny 10
Ny rariny ho fampivoarana ny marefo
Arahanao amin'ny rakitsary eto ny firarian-tsoa avy amin'i Mgr Désiré Tsarahazana. "Raha tiantsika ny ho sambatra, dia tsy maintsy mampanjaka ny marina isika", hoy i Mgr Désiré Tsarahazana tamin’ny firarian-tsoa nataony ho an'ny Malagasy amin’izao Noely izao. Tia antsika rehetra tsy an-kanavaka Andriamanitra, noho izany dia tokony hifanaja sy hanampy ary hiaro ireo marefo indrindra.
Sady mpanabe no mpitory Vaovao Mahafaly
Ry havana, migadona ity ny taona vaovao 2021. Koa amin’ny anaran’ny Fikambanana Salezianin’i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maorisy izay eo ambany fitantanako, no iarahabako antsika mianakavy Tratry ny Taona. Mirary ny soa sy ny tsara ary ny fahombiazana ho an’ny isambatan’olona sy isan-tokantrano.
Entanin'ny fanantenana isika
Nivoaka tamin'ny 29 desambra 2020 ny fanazavana ofisaly ny teny fanentanan'i P. Ángel Fernández Artime, Recteur Majeur, ho an'ny taona 2021, mitondra ny lohateny ho : "Entanin'ny fananteanana isika : indro havaoziko ny zavatra rehetra" (Ap 21,5). Efa nadika amin'ny fiteny dimy samihafa izy io: italianina, anglisy, espanola, portogey ary frantsay.
© 2021 Radio Don Bosco